Aung Myin .
Our online courses feature interactive, self-paced lessons to prepare learners at all levels for success in business management and related careers. Our vision is to “Be the leading organization for learning business and professional development programs in Myanmar”.
2nd Floor, Shwe Phyu Plaza, Mandalay.
098 9999 1979
Choose what you'd like to learn from our extensive subscription libray.
Switch between your computer, table, or mobile device.
အောက်ပါဘာသာရပ်များကို အလွယ်တကူ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါပြီ
Our online programs will enable learners to masterasubject in depth & develop skills that you needs for your business development.
The online courses spanavariety of professional subjects focusing on the areas such as Business Management, Sales & Marketing, etc.
With AungMyin’s intensive and comprehensive online courses, learners will gain valuable skills and training on key topics.
Successfully completingacourse will give learners an edge, and greatly enhance their employability and career prospects.
စိတ်ဝင်စားမှု အများဆုံး သင်ခန်းစာများ
ဘဝမှာ ကောင်းတာကိုပဲ တွေးတော့နေတဲ့သူတွေက အကောင်းတွေကိုသာ ကြုံတွေ့ရပြီး အဆိုးတွေကိုသာ တွေးတောတတ်သူများဟာလည်း အဆိုးနဲ့သာ တွေ့ကြုံရတာ များပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ လူတွေရဲ့တွေးခေါ်မှုတွေက သူတို့ရဲ့ ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကကျတဲ့ အချက်ဖြစ်တာကြောင့် ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ စည်းကမ်းနဲ့ အကောင်းမြင်စိတ်များ မွေးမြူပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ နယ်ပယ်ရပ်အသီးသီးမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ သူဌေးကြီးတွေရဲ့ ပြုမှုတတ်တဲ့ အကျင့်တွေ၊ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိတဲ့ အလေ့အထတွေကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပြီး ရေးသားခဲ့တဲ့ “Think and Grow Rich” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ ချမ်းသာအောင် တွေးတော ကြံစည်လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခမဲ့ လေ့လာနိုင်သော သင်ခန်းစာများ
ယခုဖော်ပြချက်သည် The new Strategy for Business Success သင်ခန်းစာ၏ အကျဉ်းချုံးဖော်ပြချက်သာဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်ခန်းစာ၏ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပို့ချချက်ကို "Aung Myin Learning App" ၏ "Business Management" ကဏ္ဍတွင် လစဉ်ကြေးပေးသွင်း၍ လေ့လာနိုင်ပါသည်။
နယ်မှာအလုပ်နဲ့ဆိုတော့ မြို့ကြီးတွေကိုသွားပြီး သင်တန်းတက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခု Aung Myin Learning App ကနေ သင်ခန်းစာတွေကို အလွယ်တကူနဲ့ နားလည်အောင်သင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အများကြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ Online Course လေးတစ်ခုပါ။ ထာဝရအောင်မြင်ပါစေခင်ဗျ။
အများကြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ Online Course လေးတစ်ခုပါ။
Aung Myin Learning App ကို သုံးပြီးတော့ Personal Development ကဏ္ဍက သင်ခန်းစာတွေကို အဓိက လေ့လာနေပါတယ်။ ရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အရာတွေ၊ လိုက်နာရမယ့်အရာတွေကို သင်ယူလေ့လာရလို့ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများကြီး အထောက်အကူရပါတယ်။ Download ဆွဲပြီး အချိန်မရွေးပြန်ကြည့်လို့ရတဲ့အတွက် အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်ဗျ။
ရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အရာတွေ၊ လိုက်နာရမယ့်အရာတွေကို သင်ယူလေ့လာရလို့ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများကြီး အထောက်အကူရပါတယ်။
ဒီ Online Learning App လေး သုံးရတာ ပေးရတဲ့ငွေကြေးထက်ပိုတဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုကို ရရှိစေပါတယ်။ ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီ လူကိုယ်တိုင်သွားတက်မယ်ဆိုရင် ပေးရမယ့်အချိန်၊ ကုန်ကျမယ့်ငွေကြေး၊ လမ်းပိတ်ဆို့ချိန်တွေ အများကြီးရင်းနှီးရမှာပါ။ ဒီ App လေးမှာ ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် တကယ်ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာတင်ဝင်း၊ မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က ဝါဏိဇ္ဇဗေဒ ဌာနမှူး ဒေါက်တာအောင်ကျော်လို အစရှိတဲ့ဆရာကြီးတွေအပြင် နိုင်ငံခြားက ပါရဂူဘွဲ့ယူထားတဲ့ ဆရာ/ မ တွေရယ်၊ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေ ပါဝင်ဝေမျှထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေ၊ ပညာလိုလားသူတွေအနေနဲ့ ရတနာသိုက်တစ်ခုပါပဲ။ လေ့လာကြည့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ တကယ့်ရတနာသိုက်တစ်ခုဆိုတာ အာမခံပါတယ်ခင်ဗျ။
ဒီ Online Learning App လေး သုံးရတာ ပေးရတဲ့ငွေကြေးထက်ပိုတဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုကို ရရှိစေပါတယ်။
Aung Myin Learning App ကို သုံးပြီးတော့ စီမံခန့်ခွဲမှု ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပို့ချချက်တွေကို လေ့လာရတာ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ အိမ်မှာနေပြီး မိုဘိုင်းဖုန်းက တဆင့် လေ့လာနေရုံပဲဆိုတော့ နေပူခံပြီးသင်တန်းတွေသွားစရာ မလိုတော့ဘူးလေ။ မြန်မာလိုပဲ သေချာရှင်းပြထားတော့ level မရွေး လွယ်လွယ်ကူကူလေ့လာလို့ရတာပေါ့။
မြန်မာလိုပဲ သေချာရှင်းပြထားတော့ level မရွေး လွယ်လွယ်ကူကူလေ့လာလို့ရတာပေါ့။
အပြင်မှာသင်တန်းတက်ဖို့ အချိန်မရှိတဲ့သူတွေအတွက် အရမ်းကို အသုံးဝင်ပြီး အကျိုးရှိတဲ့ App တစ်ခုပါ။ ဒီထက်ပိုပြီး အောင်မြင်ပါစေခင်ဗျ။
အရမ်းကို အသုံးဝင်ပြီး အကျိုးရှိတဲ့ App တစ်ခုပါ။
အသေးစားကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေပေမယ့် စီမံခန့်ခွဲမှုသင်ခန်းစာတွေနဲ့ သိပ်မရင်းနှီးခဲ့ပါဘူး။ Aung Myin Learning App မှ တဆင့် လေ့လာကြည့်ပြီးမှ စီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကို ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကြီးတွေက ပါမောက္ခတွေ၊ ဆရာ/ မ တွေက ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ သင်ကြားပို့ချထားတာမို့ ပေးရတဲ့ငွေကြေးနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများစွာရရှိပါတယ်။
ပေးရတဲ့ငွေကြေးနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများစွာရရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်က HR တာဝန်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ တစ်ခါ INGO အဖွဲ့တစ်ခုမှာ HR Assistant အနေနဲ့ လျှောက်ထားခဲ့ပေမယ့် အင်တာဗျူးပါဝင်ဖြေဆိုခွင့် မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ HR နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေ ရှာဖွေစုဆောင်းထားရမယ်ဆိုပြီး Google Playstore မှာ HR ဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ App ကို ရှာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ Aung Myin App ကို တွေ့ခဲ့တယ်။ Download ဆွဲပြီး Account တစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဘာသာရပ်ကို လေ့လာခွင့်ရခဲ့လို့ အရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ Aung Myin Online Course ကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ဆရာ/ မ တွေက အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ HR နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေအများကြီး လေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
HR နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေအများကြီးလည်း ရရှိပါတယ်။
Aung Myin Online Learning App က စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူနေသူတွေအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့သက်ဆိုင်သောပညာရပ်များ ဝေမျှရာစင်မြင့်တစ်ခုပါ။ စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်အစုံ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှု၊ ကမ္ဘာကျော်စာအုပ်များ၏ အနှစ်သာရသုံးသပ်ချက်တွေအပြင် အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အတွေ့အကြုံများဝေမျှမှု စသည့်တန်ဖိုးများစွာကိုပေးနေသော ပညာရေးလေ့လာရာ ဘဝတက္ကသိုလ်တစ်ခုပမာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားသာချက်ကတော့ အလုပ်များပြီးသင်တန်းတက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်သူတွေအတွက် မိမိအိမ်၊ ရုံးမှာပဲ လေ့လာနိုင်ပြီး နည်းပါးတဲ့သင်တန်းကြေးဖြင့် သင်ယူနိုင်တာကို အထူးသဘောကျမိပါတယ်။
လေ့လာသင်ယူရတာ စိတ်ကျေနပ်မှုများစွာရတဲ့ Learning App တစ်ခုပါ။ စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Online Course တွေထဲမှာ ကိုယ်လေ့လာချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး အသေးစိတ်သင်ကြားလို့ရတဲ့အတွက် ဗဟုသုတများစွာရရှိစေပါတယ်။ နောက်ထပ်အခြား Course တွေ ထပ်မံလေ့လာသွားပါဦးမယ်။
လေ့လာသင်ယူရတာ စိတ်ကျေနပ်မှုများစွာရတဲ့ Learning App တစ်ခုပါ။
Aung Myin App ကို သုံးရတာ သိပ်အဆင်ပြေပါတယ်။ လစဉ်သင်ခန်းစာအသစ်တွေ များများတင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို သင်တန်းတက်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်သူတွေအတွက် တကယ်အကျိုးရှိတဲ့ App တစ်ခုပါ။
တကယ်အကျိုးရှိတဲ့ App တစ်ခုပါ။